Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Khojasta Sameyee · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2020 3:54 GMT
Khojasta Sameyee dia avy ao Afghanistana. Manana ny diploama bakaloreà amin'ny Fitrandrahana Harena Ankibon'ny Tany, ary amin'izao fotoana izao dia manohy fianarana haka ny diplaoma Master amin'ny Fitantanana Orinasa. Nandritra ireo taona dimy farany, nanao asan'ny mpanao gazety ho ana trano famoahambaovao samihafa tao Afghanistàna izy. Tamin'ny 2018, nomena fankasitrahana izy noho ny tatitra nataony momba ireo vehivavy, ny fandriampahalemana sy ny fahatoniana, loka iray avy amin'ny UNDP/N-Peace. Nanangana gazety iray tantanim-behivavy izy ary amin'izao fotoana izao dia miasa ho an'ny gazetiny manokana. Ny Aogositra 2018 izy no nanjohy ny Global Voices.